Habka ugu fiican ee loo sameeyo VLC Media Player ciyaaryahan default on your computer waa in la dhiso hab in marka rakibaadda laftiisa. VLC Media Player, inta lagu guda jiro geeddi-socodka la rakibo, waxaad weydiineysaa haddii aad jeclaan lahayd inaad la wadaajisaan noocyada file warbaahinta kala duwan la VLC ama aan. By default, dhammaan noocyada file ayaa lagu eegaa oo kuu ogolaanaya in aad wax uncheck haddii aad rabto in aad.
In kastoo, haddii aadan samayn, halka tan rakibidda VLC Media Player on your computer laakiin waxa ay doonayaan inay ka sameeyaan ciyaaryahan default hadda, waxaad u timaadeen inaad meel sax ah. Waxaan la sheegaya doonaa sida loo sameeyo in talaabooyin aad u fudud iyo in aad on Windows iyo Mac labada aad. Ok, si aynu bilaabi.
Qeybta 1: Sida loo sameeyo VLC ciyaaryahan default for Windows ah
Qeybta 2: Sida loo sameeyo VLC ciyaaryahan default ee Mac
Qeybta 1: Sida loo sameeyo VLC ciyaaryahan default ee Windows
Orod VLC Media Player oo taga si Tools> Waxa aad rabtid
Dooro button interface dhinaca bidixda ka dooro ururada Calan hoose.
Dooro noocyada file ka mid ah liiska ay tahay in ay haatan u muuqday in aad ka hor, in aad jeclaan lahayd VLC ku noqon karo ciyaaryahanka default ee OR waxaad ku tegi kartaa fursad u Dooro oo dhan, shirkigu dhammaan noocyada file la VLC oo ka dhacay Save si loo badbaadiyo goobaha kuwaas . Iyada oo ay taasi ood ka yeesheen VLC ciyaaryahan default on your computer Windows ah.
First of dhan, heli nooca file aad rabto in aad VLC ku noqon karo ciyaaryahanka default ee iyo xaq guji ku yaal. Dooro ikhtiyaarka Hel Info. In qaybta furan, heli dooro VLC ka / daadiyaa liiska menu. Si loo hubiyo in isbeddelkan uu codsatay in dhammaan faylasha la mid ah, ku dhuftay badhanka Change oo dhan.
Wixii shirkigu files on indhaha drives / warbaahinta la VLC, tusaale ahaan CD s iyo DVD s, raac jidka this - Apple> rabtid System iyo dooro ikhtiyaarka ah ee CD-yada iyo DVD-ka Hardware qaybta. Dooro Codsiga kale ka ikhtiyaar gujisid menu hoose oo oranaya 'Open DVD Player 'oo ka mid ah liiska dooran VLC in ay ciyaaryahanka default ee aad files warbaahinta indhaha iyo sidoo sameeyo.
Sida loo ciyaaro files wmv la VLC?
> Resource > VLC > Sida loo sameeyo VLC ciyaaryahan default